जो यो अनौठो लाग्न, तर केटीहरू पनि शिशुहरू को चयन हुन सक्छ - यो सामान्य हो। नियम, उनि, बिना गंध तरल र एक whitish रंग छ। बच्चाहरु केही दिन पुरानो हो जो, मा खैरो वा spotting देखा पर्न सक्छन्। यो डर हुनु आवश्यक छैन। यो केटी गरेको रगत भ्रूण विकास समयमा हर्मोन एस्ट्रोजन penetrated छ भन्ने तथ्यलाई को परिणाम हो। जन्म पछि गर्भाशय यो प्रतिक्रिया गर्न थाल्छ। सामान्यतया धेरै अल्प चयन वर्ण र छोटो समय पछि गायब।
बालिका एक सामान्य भेद चयन किशोरावस्थामै छलफल। तिनीहरूले पारदर्शी र स्लिम हुनुपर्छ। गंध पत्ता हुँदैन। 11-15 वर्ष को उमेर मा पुरानो बालिका पहिलो महिनाको लागि गहन तयारी सुरु। luteinizing हर्मोन को एक ठूलो संख्या उत्पादन गरिएको छ। यो उत्पादन ट्रिगर "Whiter।"
त्यसैले किन केटी सेतो छुट्टी 5-10 वर्ष को उमेर मा अवलोकन र कहिलेकाहीं पहिले? वास्तवमा, कारण धेरै हुन सक्छ। असामान्य छुट्टी यदि छलफल छैन:
- वजन भएको हुन झुकाव छ;
- बच्चा तनावपूर्ण भोगेका छ;
- circulatory विफलता पत्ता छ;
- केटी atopic अवस्था अवलोकन;
- एलर्जी झुकाव छ;
- योनी मा microflora को ब्यालेन्स विरक्तलाग्दो एन्टिबायोटिक एक लामो स्वागत फलस्वरूप;
- यो मोड र आपूर्ति को प्रकृति परिवर्तन गर्न;
- प्रतिरक्षा कम।
आतंक को कुनै आवश्यकता आवंटन यी कारणहरू मध्ये एक को परिणाम हो भने। यसको हटाउने गरेपछि तिनीहरूले टाढा जाने।
एकदम फरक मामला निर्धारण बालिका छन् एक अप्रिय गन्ध र पहेंलो वा greenish रंग। यो बच्चा रोग विकास हुन्छ भनी प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अक्सर, सबै परीक्षण "vulvitis" वा "vulvovaginitis" निदान पछि। यी र यस्तै रोगहरु gynecological छन् हुनत, यौनजन्य संग भ्रमित गर्न आवश्यक छैन। को vulva को श्लेम लाग्एको झिल्ली को यो सुनिंनु। धेरै अवस्थामा, रोग पनि योनी छुन छैन। तसर्थ, छोराछोरीको स्त्रीरोग विशेषज्ञ जान डराउनु कुनै कारण छैन।
Vulvitis विभिन्न कारण विकास:
- किनभने बच्चा स्वच्छता उत्पादनहरु (साबुन, स्याम्पु, क्रीम कहिलेकाहीं) गर्न छाला को चरम संवेदनशीलता;
- सानो माटो कण वा मरेको छाला कक्षहरूको समूहहरु को ingress कारण;
- कारण ऊतक swaddling वा पाउडर, को डायपर मेट्ने जो रिसले हुन सक्छ;
- बाक्लो गाढा-पहेंलो छुट्टी को बालिका देखि, खकार जस्तै योनी मा एक विदेशी वस्तु संकेत हुन सक्छ;
- बाहेक निर्वहन गर्न भने, त्यहाँ छ को perineum, मा खुजली राति परिलक्षित छ जो, यी pinworms उपस्थितिको लक्षण हो कि संभावना छ।
केटी गरेको किन जारी, धेरै बारे प्रश्न गर्न उत्तर। निश्चित लागि पत्ता लगाउन, तपाईंले आफ्नो बाल विशेषज्ञ परामर्श आवश्यक छ। विशेष गरी ती अवस्थाहरूमा जहाँ यो एक बच्चा खेल, योनी मा विदेशी वस्तुहरु राख्न, वा यदि त्यहाँ helminth संक्रमण संकेत हो कि आशङ्का छ मा। गम्भीर संक्रमण उपस्थिति धारिलो अप्रिय गंध संग बाक्लो प्रचुर पुष्टि हुनेछ।
बेहोशी: कारणहरू र पहिलो सहायता
Atheroma: हटाउने, लक्षण, को कारण
बाथरूम लागि थ्रेड नल: समीक्षा, स्थापना
नीलमणि को रंग: के निर्धारण
कसरी मार्फत र साथ अन्वेषण गर्न?
तपाईं स्वस्थ हुन के गर्न आवश्यक के: स्वस्थ जीवन शैली को आधारभूत नियमहरू
मास्को मा Safes र एटीएम को सावधान यातायात